လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ မြင်သူတိုင်းငေးမောသွားစေလောက်တဲ့ ထိထိမိမိလေး လှနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်……. – Cele Oscar
လှပလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ မြင်သူတိုင်းငေးမောသွားစေလောက်တဲ့ ထိထိမိမိလေး လှနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်…….
အမိုကျစား ကောကျကွောငျး အလှတရားတှေ ကွောငျ့ ပုရိသတှေ ကွှကေနြရေ သူလေးကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး သငျဇာဝငျ့ကြျော ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဗီဒီယိုဇာတျကားမြား နဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေို ရိုကျကူးခဲ့ရပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျ အားပေးခဈြခငျ မှုတှကေို ရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးလညျး ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ သငျဇာ တဈယောကျ ကွျောငွာလေးတှေ ဆကျတိုကျ ရိုကျကူးနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွူဝငျးပွီး ကဈြလဈ သှယျလတြဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတှပေျေါလှငျပွီး ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ နဲ့ ညို့အားပွငျးတဲ့ ပုံရိပျ တှကေို လှုမှုကှနျယကျ ဖဘှေ့တျပျေါတှငျ ဖျောပွလေ့ ရှိကာရပေနျးစား လူကွိုကျမြားတာ လညျးတှရေ့ပါတယျ ။
လတျတလော မှာတော့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိလှနျးတဲ့ အသားကပျ ဖကျရှငျလေးကို ဝတျဆငျပွီး အသညျးယားစရာ ကောငျးတဲ့ ပို့ဈလေးတှေ မြိုးစုံပေးနတေဲ့ ပုံလေးတှကေို ဖျောပွထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ပုံလေးထဲမှာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိ နဲ့ လှရကျလှနျးနတော အခါခါ ပွနျကွညျ့တိုငျး မရိုးနိုငျလောကျ အောငျပါပဲ ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ သငျဇာရဲ့ ဖကျရှငျ ပုံရိပျတှကေို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ ။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေ ကြောင့် ပုရိသတွေ ကြွေကျနေရ သူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးချစ်ခင် မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သင်ဇာ တစ်ယောက် ကြော်ငြာလေးတွေ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဝင်းပြီး ကျစ်လစ် သွယ်လျတဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားတွေပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအပြည့် နဲ့ ညို့အားပြင်းတဲ့ ပုံရိပ် တွေကို လှုမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် ဖော်ပြလေ့ ရှိကာရေပန်းစား လူကြိုက်များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ် ။
လတ်တလော မှာတော့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ အသားကပ် ဖက်ရှင်လေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး အသည်းယားစရာ ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက်လွန်းနေတာ အခါခါ ပြန်ကြည့်တိုင်း မရိုးနိုင်လောက် အောင်ပါပဲ ။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် သင်ဇာရဲ့ ဖက်ရှင် ပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ် ။
“ရောင်းစရာ သေနတ်ဆိုလို့ သရက်သီးသနပ် ဘဲရှိတယ်လို့” မကောင်းပြောနေတဲ့ သူတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်…..